Banyere Anyị - Nnyocha nkenke
Nkọwapụta nkenke, guzobere na 2010, nke ndị injinia ọkachamara dị elu, ndị ọrụ nchịkwa na ndị ọrụ mara mma nwere ihe karịrị afọ 18 nke ahụmịhe na mmepụta, ndụmọdụ na ire ngwaahịa ngwaahịa nzacha mmiri na ngwa ndị metụtara ya.
Anyị na -adụ ọdụ, na -emepụta ma na -ebubata arịa nzacha akpa mmiri mmiri, ihe nzacha katrij, ihe nhicha, sistemụ nhicha onwe ya, akpa nzacha, katrij nzacha, wdg, maka nzacha mmiri ala, usoro mmiri, mmiri dị n'elu, mmiri mkpofu, mmiri DI na semiconductor & ụlọ ọrụ eletrọnịkị, mmiri ọgwụ na ọgwụ, mmanụ & gas, nri & ihe ọ beụ, ụ, ọgwụ, nrapado, agba, ink na ngwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Nkọwapụta nkenke na -arụpụta ma na -eweta nzacha akpa dị elu maka ụlọ ọrụ ahụ. Anyị nwetara ụlọ nrụpụta nke anyị, yabụ anyị na -ebuga ngwa ngwa, kacha mma na ọnụahịa yana ogo dị elu.
Anyị nwere oke nhọrọ nzacha site na 0.2 micron ruo 1,200 micron, ihe mejupụtara ihe dị iche iche iji hụ na ndakọrịta kemịkalụ ya. Ihe nzacha akpa ndị a dị na ihe: Polypropylene (agịga chere), polyester, nylon (NMO), Nomex, PTFE, PP gbazere mgbasa ozi nzacha microfiber maka nzacha arụmọrụ dị elu ma ọ bụ ike mwepụ mmanụ.
Nkọwapụta nkenke bụ mmepụta ọkachamara, ndụmọdụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa n'ime nzacha mmiri ma na -enye azịza nzacha ahaziri maka mkpa onye ahịa.
Anyị na-enye ngwaahịa nzacha dị elu ma wulite nnukwu ndị ahịa n'afọ ndị na-adịbeghị anya na mmekọrịta ndị ji ntụkwasị obi anyị, ezigbo ọrụ na ọnụahịa asọmpi kpọrọ ihe.
Ebupụla ngwaahịa anyị na Canada, Brazil, Germany, Italy, South Africa, Australia, South Korea, Indonesia, Philippines na obodo ndị ọzọ na mpaghara Asia Pacific. Anyị nwere ndị otu maara ngwa ụlọ ọrụ ma ghọta isi ihe na -eme nzacha dị mma. Anyị na -aga n'ihu ịkwalite ngwaahịa anyị site na usoro R&D anyị.
Nkenke filtration, onye mmekọ na mmiri nzacha. Ndị otu anyị dị 24/7.